Sida loola tacaalo lamaanaha dhibaatada ka dhalatay imaatinka ubadkoodii ugu horeeyay | Bezzia
Maria Jose Roldan | 12/01/2022 22:14 | Xiriirka
Imaatinka ilmaha had iyo jeer waxay ka dhigan tahay isbeddel ba'an oo nolosha lammaanaha ah. Adiga oo aan aqoon sida saxda ah loo maareeyo, waxaa suurtagal ah in aasaaska xiriirka uu bilaabo inuu u burburo si khatar ah. Dhalashada cunugga shaki la'aan waa imtixaan yar oo waalidka ah.
Ogaanshaha sida loo maareeyo xaaladda cusub waxay gacan ka geysan kartaa xoojinta xiriirka iyo si ay u awoodaan in ay si buuxda ugu raaxaystaan ​​xaqiiqda ah in dhalmada u maleeyo. Maqaalka soo socda waxaan ku tusi doonaa sababaha ama sababaha lamaanaha isqaba ka hor imaatinka ubadkooda ugu horeeya iyo waxa la sameeyo si loo daweeyo.
1 Xiisadda lamaanaha ka dib dhalashada ilmahooda ugu horreeya
2 Sababaha keena qalalaasaha lamaanaha oo ay ugu wacan tahay imaatinka ubadka
3 Waxa la sameeyo si looga fogaado waqtiyada qalalaasaha ka dib dhalashada ilmaha ugu horreeya
Xiisadda lamaanaha ka dib dhalashada ilmahooda ugu horreeya
Lamaane kastaa wuxuu ula tacaalaa dhibaatada suurtagalka ah si ka duwan. Mararka qaar waxaa dhacda in si joogta ah loo dagaalamo ama lagu canaanto, halka xaaladaha qaarna uu jiro niyad jab. Si kastaba ha ahaatee, tani gabi ahaanba kuma wanaagsana xiriirka, taasoo ku keenta hoos u dhac weyn.
Haddi wax la xalin waayo, Waxay u badan tahay in raaxo-darrada aan kor ku soo sheegnay ay si xun u waxyeeleyso qoyska oo dhan. Si taas looga fogaado, waxaa muhiim ah in la helo sababaha keena raaxo la'aanta noocaas ah oo la dhaqmo si xudunta qoyska aysan u dhaawacmin wakhti kasta.
Sababaha keena qalalaasaha lamaanaha oo ay ugu wacan tahay imaatinka ubadka
Sababaha ugu horreeya waxaa badanaa sabab u ah dhinacyada shakhsi ahaaneed ee labada waalid. Xaaladda hooyada, waa in la ogaadaa in jirkeeda uu ku dhacay isbeddello muhiim ah iyo sidoo kale xaaladdeeda shucuur. Xaga aabaha. Mas'uuliyadda ayaa aad u weyn gaar ahaan marka ay timaado daryeelka ilmaha yar.
Sababta kale ee xiisadda ayaa laga yaabaa inay sabab u tahay isbeddel weyn oo ku yimid hawl maalmeedka caadiga ah. Dhalashada ilmo waxay la macno tahay inaad si buuxda u beddesho noloshaada oo aad diiradda saarto gabi ahaanba wanaagga ilmaha. Waalidiintu si dhib leh ayay waqti ugu haystaan ​​naftooda iyo inay awoodaan inay isku xidhaan.
Mid ka mid ah sababaha ugu badan ee ay lammaanuhu ku murmaan marka ay ilmahooda kowaad dhalayaan waxaa sabab u ah kala qaybsanaanta shaqada guriga. Marar badan ma jirto sinnaan marka la qaybinayo hawlaha kala duwan ee guriga dhexdiisa iyo Tani waxay ku dhammaataa khilaaf xooggan.
Shaki kuma jiro in daryeelka ilmuhu uu noqdo hawsha ugu muhiimsan ee lammaanaha dhexdooda. Tani waxay la macno tahay in wakhtiga lammaanaha uu si weyn hoos ugu dhacay. Waqtiyada raaxaysiga lammaanaha ayaa gebi ahaanba baaba'a taasina waxay saamayn taban ku yeelanaysaa mustaqbalka wanaagsan ee xidhiidhka.
Waxa la sameeyo si looga fogaado waqtiyada qalalaasaha ka dib dhalashada ilmaha ugu horreeya
Waxaa wanaagsan in waalidiinta mustaqbalka ay ogaadaan ka hor dhalmada, wax kasta oo ku yimaada dhalmada.
Waxba kuma jabna inaad fadhiiso, la hadasho, oo aad bilowdo inaad habayso hawlaha kala duwan ee aad la tacaalayso marka ilmahaagu dhasho. Waa hab cadaalad ah oo wax ku ool ah oo looga hortagayo isku dhacyada iyo dagaalada iman kara.
Waa muhiim in waalid kastaa haysto wakhti yar oo firaaqo ah, si ay u awoodaan in ay gooyaan dhowr daqiiqo mas'uuliyadda daryeelka ilmaha.
Haddii loo baahdo, waa caadi inaad caawimo weydiiso asxaabta ama qoyska. Mararka qaarkood caawimadani waa lama huraan si looga fogaado xaaladaha walaaca ama walaaca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Sida loola tacaalo lamaanaha dhibaatada ka dhalatay imaatinka ilmahooda kowaad
Gabadhaydu waxay rabtaa inay xidhato isqurxin, ma goor hore baa?